အန်းဒရွိုက်ကလေးများ APK ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » ပျော်စရာ & ဂိမ်းများ » ကလေးတွေ
Category: - ကလေးများ
စမတ်ဖုန်းလေးတွေဘို့အကြံပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်အန်းဒရွိုက်ပလက်ဖောင်းနဲ့အနားသတ်မှတဆင့်ရှည်လျားသောလမ်းလာခဲ့ပါသည်။ ယနေ့သင်တို့အဘို့ဒီဇိုင်းဂိမ်းများနှင့် app များကိုများများရှာတှေ့နိုငျ ကလေးတွေ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်။ ကဖြည့်ညှင်းအတွက်ကစားလျှင်သုတေသနအဆိုအရ gamin ပျော်စရာနဲ့တန်ဖိုးရှိရှိလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။
ရရှိနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားသောအခမဲ့ဂိမ်းရှိပါတယ် ကလေးတွေ သူတို့ရဲ့အရေးပါအတှေးအချေါနဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုမြှင့်တင်ရန်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းမဟုတ်ဘဲမလှုပ်မရှားတဲ့ TV ကိုကြည့်ထက်တက်ကြွပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်။ မိဘတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ကလေးတွေပဲသူတို့အဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံး app များကို အသုံးပြု. ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်သင်၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့မှာသူငယ်များအဘို့ကိုအကောင်းဆုံး apps များစာရင်းကြောင့်စိတ်ပူမနေပါနဲ့ Apps ကပ APK ကို.
ကျနော်တို့အဟောင်း5နှစ်ယောက်ျားလေးများနှင့် 11 ထံမှမိန်းကလေးငယ်နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအထိပ်အခမဲ့ဂိမ်းပူဇျောပါပွီ။ သူတို့ကအတိမ်အနက်နှင့်ရုတ်တရက်, ပြည့်စုံ, အကြီးအတှေ့အကွုံမြားနှင့်လုံးမျှအကြမ်းဖက်မှုရှိသည်။ အားလုံးအားလုံးအတွက်ဤဂိမ်းအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလေးတွေများအတွက်ပျော်စရာဖြစ်ကြသည်။
ယနေ့ခေတ်ကလေးတွေဟာစမတ်ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်ထက်တစ်ဦးကို PC ပေါ်တွင်ကစားနှင့်အတူပထမဦးဆုံးလက်အတွေ့အကြုံကိုရ။ ဤနည်းကျနော်တို့သူတို့အဘို့အကောင်းဆုံးဂိမ်းပေးပိုအာရုံစိုက်။
ကျနော်တို့ Play Google က3+ rated နေကြသည်သမျှဂိမ်းတွေရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကပင်အလွန်ငယ်ရွယ်နေသောလေးတွေအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။ ဤအဂိမ်းများကိုအားလုံးကစားရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်ကြသည်။
တစ်နည်းနည်းနဲ့သို့မဟုတ်အခြားအခမဲ့ဂိမ်းငွေရှာဖို့လုပ်နေကြတယ်။ သငျသညျ In-app ထဲမှာဂိမ်းကိုဝယ်ခြင်းငှါဝယ်ယူမှု add-ons တွေကိုရှိသည်သောဂိမ်းတွေအများကြီးရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ တချို့က apps များလည်းကြော်ငြာတွေရှိသည်။ သင်အလွယ်တကူသူတို့ကိုကမပေးခင်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကို disable နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကြော်ငြာတွေရှိပါကသင်သည်ဤဂိမ်းကိုယ့်ကိုကိုယ်စမ်းသပ်ကြည့်ကြပြီးဖေါ်ပြခြင်းနေသောကြော်ငြာတွေသူတို့ကိုလည်းရင့်ကျက်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုအကောင်းဆုံး app များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခဲယဉ်းကြိုးစားနေကြပါတယ်လျှင်, ငါတို့သည် Apps ကပ APK ကိုမှာပိုမိုလွယ်ကူစေပြီ။
Thinkrolls: ဓမ္မရာဇဝင် & ...
Lightbot: Code ကိုနာရီ
LEGO® Junior Create & ...